Carnival Corporation AIDA Cruises: Kasị njọ Ekele nye akụkọ ihe mere eme
Location: Mbido » Ịdee » Isesgbọ mmiri » Carnival Corporation AIDA Cruises: Kasị njọ Ekele nye akụkọ ihe mere eme
Otu onye njem kwuru na ya gbara akwụkwọ Pre-Christmas Cruise ugbua n'ọnwa Machị ma kwụọ ụgwọ ahụ maka njem a ga-eme n'April 2018, sị, "Ekele kachasị njọ n'akụkọ ihe mere eme."
Oge nkwụsị ikpeazụ nke oge ụgbọ mmiri maka akwụkwọ maka ọnwa Disemba na AIDAnova, nke mbụ gas (LNG) nke na-arụ ọrụ ụgbọ mmiri n'ụwa ruo na Disemba 19, hapụrụ ọtụtụ puku ndị njem na iwe na iwe. AIDAnova bụ ụgbọ mmiri nke Meyer Werft GmbH wuru na Papenburg, Germany, n'okpuru nkwekọrịta si Carnival Corporation maka AIDA Cruises.
Dabere na ozi ndị ahịa sitere na ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri, Meyer Werft na ndị mmekọ ya chọkwuru obere oge. Na mgbakwunye na nwa agbọghọ njem, n'ihi ụgbọ si Hamburg na Gran Canaria na Disemba 2, akagbuola njem ụgbọ mmiri ise ọzọ. Enweela ọkụ na ụlọ ime ụlọ 2 mgbe ị na-aga njem maka ule njem. O doro anya ma ọ bụrụ na ọ bụ nsure ọkụ; Ndị uwe ojii Dutch ka na-enyocha.
A ga - enyefe ụgbọ mmiri ugbu a na AIDA Cruises na Disemba ma dị na Disemba 19 maka ndị ọbịa mbụ na Tenerife, Canary Island.
AIDA bụ ọdụ ụgbọ mmiri kachasị ukwuu na Europe (nke TUI sochiri) na-elekwasị anya ndị na-eto eto na ndị njem na-arụsi ọrụ ike. E hiwere AIDA na 1960 (dika "Deutsche Seereederei") yana P&O Princess Cruises, nke enwetara na 2000, na 2003 jikọtara ya na Carnival Corporation (onye nwe ụgbọ mmiri). AIDA ụgbọ mmiri mbụ nke AIDA bụ nke Meyer Werft Papenburg na-arụcha ugbu a nke chọrọ ịkwụsị ọrụ na ụgbọ mmiri mbụ LNG Cruise nke buru ndị njem 6,600 - obodo nke aka ya.
Ewubere ụgbọ mmiri AIDAnova Yergbọ mmiri Meyer Werft (Papenburg Germany) na-eri nke
US $ 950 nde. Nke a bụ nke mbụ nke 3 AIDA Helios-class liners. Shipgbọ mmiri nke abụọ (nke a na-akpọghị aha) ga-ebupụta na oge opupu ihe ubi nke 2021, ebe a ga-enyefe nke atọ (TBN) na 3.
A maara Meyer Shipyard maka ịnyefe oge na ọtụtụ oge agwụla ụgbọ mmiri tupu ụbọchị nnyefe. Meyer Werft Papenburg gwara AIDA Cruise Management na Ọktọba na ụgbọ ahụ agaghị adị njikere n'oge maka November 30 nnyefe.
Ihe kpatara ọhụụ a bụ na ebe ọha na eze na-ebu ụgbọ mmiri ahụ dị mita 337 agwụchabeghị.
Yabụ kedu ihe kpatara AIDAnova Management na Rostock ji meghachi omume?
Kedu ihe kpatara ha jiri chere rue Nọvemba 16 iji gwa ndị njem nọ na-akwadobe maka ịpụ na njem mbụ AIDAnova?
Ndị njem AIDAnova nwetara akụkọ ọjọọ ahụ na Nọvemba 16 mgbe ụlọ ọrụ ahụ kwupụtara na a kagburu ụgbọ mmiri Disemba niile.
A hapụrụ ndị njem azịza ọ bụla site n'aka ndị ọrụ njem ha ma ọ bụ site na ederede site n'aka njikwa AIDA na isi ụlọ ọrụ Rostock. O ruola ụbọchị ole na ole kemgbe ha chọrọ azịza ma ka na-eche echiche banyere njikwa nke AIDA iji mee nkwupụta okwu.
Maka ụbọchị ugbu a, ndị njem AIDAnova na-ezipụ ozi ịntanetị na-arịọ maka ego. Mana ha na anata ndụmọdụ na akpaghị aka na enweghị isi iji tinye akwụkwọ maka ọgwụgwọ spa ma ọ bụ njem njem ala, dịka ugbu a onye ọ bụla nọ na AIDA nọ n'ọrụ, na-ekwusi ike na mmadụ ga-aza n'oge ọzọ. Anyị niile maara na nke ahụ agaghị eme, ọ dịtụbeghị n’oge gara aga, yabụ gịnị kpatara ugbu a?
Ọ dị mma, ọ bụrụ na ọ bụghị Germany - ọ bụghị Italy Costa Crociere na Genua - mgbe ahụ isi ụlọ ọrụ Carnival na Miami, ụlọ ọrụ nwere ụgbọ mmiri ga-enwe ike ịza. Mana Carnival Miami nke isi ụlọ ọrụ adịghị - ọ bụ ezumike ezumike na America.
Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị njem chere na ụlọ ọrụ ahụ chọrọ mgbazinye ego kredit ngwa ngwa site na iji ego ha na-arụ ọrụ ihe karịrị ọnwa 7 tupu ịkagbu njem ahụ, ndị ọzọ na-ewe iwe na ọ mebiela atụmatụ Krismas ha niile na atụmatụ nke ndị ikwu ha, ndị enyi, na ezinụlọ, kwa.
Christine Duffy, nwanyị mbụ dị ka onye isi oche nke ndị ọrụ ụgbọ mmiri kachasị ukwuu n'ụwa, ọ bụghị naanị onye isi nke nnukwu akara n'ụgbọ mmiri nke ụgbọ mmiri zuru ụwa ọnụ, onye ndu Carnival Corp., ụlọ ọrụ njem njem kachasị na ụwa kwuru, sị: “Abụ m nnukwu onye kwere ekwe n’inye ihe. Otu n'ime ụkpụrụ ụlọ ọrụ anyị bụ igosi na anyị na-asọpụrụ ibe anyị, ụgbọ mmiri anyị, ụlọ anyị na ebe ndị anyị gara.
"Anyị na-agbasi mbọ ike ịbụ ezigbo nwa amaala ụlọ ọrụ ma nwee nnukwu obi ụtọ maka ndị otu anyị na-ewepụta onwe ha, kwado, ma kesaa ịnụ ọkụ n'obi a maka ime ihe ziri ezi." (Ma ọ bụghị n'oge Inye Ekele.)
Companylọ ọrụ ahụ nke na-ebu ụgbọ mmiri nke ụgbọ mmiri 26 ma na-akwado ihe karịrị nde mmadụ 5 kwa afọ enweghị onye na-aza ekwentị na ezumike Ekele. Onye nwere ike icho anya na mmadu nile na-aru oru na idobe AIDAnova ka o kwoo.
Onye 183,900-ton, 5200 na-ebu ụgbọ mmiri AIDAnova so na ụgbọ mmiri kachasị elu na ụwa. E nyefere ụlọ ọrụ ahụ ụlọ ọrụ ahụ n'oge mgbụsị akwụkwọ 2018.
E wezụga ndị ọrụ na ndị ọrụ ụgbọ mmiri ahụ, ndị ọrụ ụgbọ mmiri AIDA na-ejekwa ozi Ígwè ọrụ ụgbọ ala Peper - teknụzụ cyborg kachasị ọhụrụ etinyere na ntanetị na 2016. Ndị a humanoid robots na-ekele ma duzie ndị njem n'elu njem. Ha na-enyere ha aka na njem ha niile site na ịnye ozi na ndụmọdụ banyere iri nri, ntụrụndụ, mmemme na-abawanye (nzukọ ọmụmụ, mmemme emere tupu oge ahụ), ịgba chaa chaa na ịzụ ahịa ahịa, njem ụgbọ mmiri, na njem. Igwe mgbanaka Peper na-agagharị ma na-ekwurịta okwu n'asụsụ 3 (Bekee, German, na Italiantalian). Ha nwekwara ike ịkọwa mmetụta uche mmadụ site na nyocha ụda olu na ọdịdị ihu.
Na Julaị 2015, Carnival Corporation bịanyere aka na Meyer Werft nkwekọrịta nrụpụta ụgbọ mmiri maka owuwu nke ụgbọ mmiri ọhụụ 4 ọhụrụ.
N'ime ndị a, ndị ọrụ 2 bụ maka Costa Cruises na 2 ọzọ maka AIDA (Nova na TBN1). Na February 27, 2018, Carnival Corporation bịanyere aka na nkwekọrịta nrụpụta ụgbọ mmiri maka ụgbọ mmiri 3rd AIDA (nnyefe ezubere na 2023). Nke a bụ iwu ụgbọ mmiri 98th maka ụgbọ mmiri zuru ụwa ọnụ nke ụgbọ mmiri (ụgbọ mmiri na akwụkwọ ntuziaka 2018-2026).
Na-eje ozi tumadi n'ahịa ndị na-asụ German, AIDA na-arụ ọrụ ụgbọ mmiri Nova na azụmahịa iji ụgbọ mmiri na-ebute njem site na Germany yana UK.
Ka ọnwa nke iri na abụọ nke ọnwa Febụwarị, 21, e mere emume mgbanaka arịa ahụ na Yergbọ mmiri Meyer Werft (Papenburg Germany). Site na mmemme a pụrụ iche, arụ ọrụ ụgbọ ahụ malitere.
Na Febụwarị 2018, ekwuputara na AIDAnova ga-enye njem njegharị ọhụụ (“premier cruise”) nke emebere tupu nwa agbọghọ ahụ aga njem na Disemba 2. Nkọwa ahụ gụrụ:
Emeghariri njem mbu niile (“Obere njem”) maka ntinye akwụkwọ na Febụwarị 1, 2018.
Itzọ njem ụbọchị 4 nke mbụ na-apụ na November 15 - ozugbo nnyefe ụgbọ mmiri gasịrị Bremerhaven. Gbọ njem a otu ụzọ si Oslo gaa Hamburg (bịarute na Nọvemba 19).
Shortgbọ njem ndị ọzọ dị mkpirikpi na-apụ na Hamburg ma otu Oslo Norway or Rotterdam Holland.
Nke a bụ echiche efu.
Oge eruola ugbu a na njikwa ahụ na-eme ma na-apụta na atụmatụ ịkwụ ụgwọ na-agwa ndị njem ha nwere mmechuihu na-anwa ị nwetaghachi obi ike ha.
AIDA ụgbọ mmiri Ntu Christmas Corporation Crugbọ mmiri Costa Shipgbọ mmiri Germany Gran Canaria Italy Management Meyer Werft Miami Norway Oslo Rotterdam inye ekele
Onye Minista na-ahụ maka njem nleta na Jamaica ịga nzukọ mmemme UAE-Caribbean
Ndị njem ụgbọ mmiri Jamaica na-achọkarị ahịa ụgbọ mmiri
Ụgbọ elu ọhụrụ anaghị akwụsị akwụsị si Toronto gaa Nashville
Kedu ka esi ezipu ego na Russia?
Ahịa Premixes ahaziri ahazi 2022 Mmepe zuru ụwa ọnụ...